Ciidamada Puntland iyo Somaliland oo madaafiic isku weydaarsaday meel u dhow Tukaraq - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada Puntland iyo Somaliland oo madaafiic isku weydaarsaday meel u dhow Tukaraq
Ciidamada Puntland iyo Somaliland oo madaafiic isku weydaarsaday meel u dhow Tukaraq
May 14, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia, Somaliland 0
Ciidamada Puntland iyo Somaliland oo madaafiic isku weydaarsaday meel u dhow Tukaraq. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa subaxnimadii saakay oo Isniin ah madaafiic isku weydaarsaday meel u dhow tuulada Tukaraq ee gobolka Sool, ilo-wareed katirsan ciidamada Puntland, oo codsaday in magaciisa aan la sheegin, ayaa u sheegay warsidaha Puntland Mirror.
Markii hore, Somaliland ayaa madaafiic ku soo riday kadib markii ciidamada Puntland ay aaga ka sameeyeen dhaqdhaqaaq. Ilo-wareedka katirsan Puntland ayaa sheegay in ay iyaguna dib u rideen madaafiic kale.
Si kastoo ay ahaataba, xaalada ayaa hadda degan, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray.
Xaalada ayaa timid kadib markii ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating uu safar ku tagay Garoowe iyo Hargeysa uuna la kulmay hoggaamiyaasha Puntland iyo Somaliland si uu iskugu dayo dadaaladiisii ugu dambeeyay si uu u dhammeeyo ismari-waaga ciidan ee uu dhaxeeya labada dhinac.
January 25, 2018 Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo ka digay in xiisada u dhaxeysa Puntland iyo Somaliland ay keeni karto rabshad
January 8, 2018 Puntland oo ku eedaysay Somaliland in ay dagaal soo qaadeen si ay u carqaladeeyaan safarka Madaxweyne Farmaajo
May 15, 2018 Madaxweyne Farmaajo oo codsaday in la joojiyo dagaalka u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland
Puntland and Somaliland exchange mortar fire near Tukaraq
Shirka maamul goboleedyada Soomaaliya oo ka faurmay magaalada Baydhabo
Somalia to host conference on illegal charcoal trade
Somalia will next month host a two-day international conference aimed at stopping illegal charcoal trade in the Horn of Africa nation, organizers said Saturday. The May 7-8 conference, which will bring together Somali environment experts [...]
Nin lagu eedeeyay in uu maleeshiyada Daacish u duubi jiray muuqaalada oo maxkamad lagu soo taagay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Nin lagu eedeeyay in uu maleeshiyada Daacish u duubi jiray muuqaalada ayaa maanta oo Sabti ah kasoo muuqday maxkamada ciidamada Soomaaliya ee Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa bishii lasoo dhaafay ee April soo [...]
Puntland oo toogasho ku fulisay toddobo xubnood oo katirsan ururka Al-Shabaab
Boosaaso-(Puntland Mirror) Puntland ayaa maanta oo Jimce ahayd dil togasho ah ku fulisay toddobo xubnood oo katirsan ururka Al-Shabaab. Cawil Axmed Faarax oo ah guddoomiyaha maxkamada ciidamada Puntland ayaa warbaahinta u sheegay in xubnaha la dilay [...]